Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A November 2011 (1)
Q and A November 2011 (1)
၁။ မိခင်လောင်းတွေအတွက် ဖတ်စရာတွေ
၂။ ညာဘက် ဗိုက်အောက်နားက
၃။ သမီးလေးက ၉ လရှိပါပြီဆရာ
၄။ အဲဒီအဖြေက ပြီးခဲ့တဲ့ ဘယ်နှစ်လထိ အကျုံးဝင်ပါသလဲ
မိခင်လောင်းတွေအတွက် ဖတ်စရာတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို ဆရာ့ဆိုဒ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ရှာဖတ်ရမလဲ။ သူ့အောက်က ခေါင်းစဉ် တခုချင်းစီကို ဖတ်ကြည့်ချင်လို့ပါ။
1. ANC (2) ဗိုက်အပ်ခံခြင်း
2. ANC ကိုယ်ဝန်ဆောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း
3. Become pregnant ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြင်း
4. Bleeding During Early Pregnancy ကိုယ်ဝန်နုစဉ် သွေးဆင်းခြင်း
5. CS and Anesthesia ဗိုက်ခွဲမွေးတာ ဘယ်မေ့ဆေး သုံးမှာလဲ
6. Hepatitis C and Pregnancy အသဲရောင် (စီ) နဲ့ ကိုယ်ဝန်
7. Honeymoon ဟန်းနီးမွန်း
8. Linea negra ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ ဗိုက်ကိုကြည့်
9. LSCS and Normal labor ဗိုက်ခွဲမွေးတာ နဲ့ ရိုးရိုးမွေးတာ
10. LSCS ဗိုက်ခွဲမွေးရခြင်း
11. Matching blood group before marriage လက်မထပ်ခင် သွေးအုပ်စု စစ်ဘို့ အရေးကြီးသလား
12. Normal labor ကလေး မီးဖွါးခြင်း
13. Pregnancy and Air Travel ကိုယ်ဝန်နဲ့ လေယာဉ်ခရီး
14. Pregnancy and Hepatitis B ကိုယ်ဝန် နှင့် ဘီပိုး
15. Pregnancy and Prednisolone ကိုယ်ဝန်နှင့် (ပရက်နဆိုလုံး)
16. Pregnancy and Ultrasound ကိုယ်ဝန်ဆောင် နှင့် (အာလ်ထွာ-ဆောင်း)
17. Pregnancy and Vomiting ကိုယ်ဝန်နှင့် အန်ခြင်း
Fri, Nov 4, 2011 at 5:24 PM
ကျွန်တော် ညာဘက် ဗိုက်အောက်နားက တစ်ချက်တချက် အောင့်အောင့် နေပါတယ်။ ဝမ်းလည်းပုံမှန်သွားပါတယ်။ ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတာ ၁ ပတ်လောက် ရှိပါပြီ။ အသက်က(၃၂)နှစ်ရှိပါပြီ။ ဘာဖြစ် တာပါသလဲ ခင်ဗျာ။ ဘာဆေးသာက်ရပါလဲ ခင်ဗျာ။
ဆရာဝန် ပြပြီးပြီလား။ ဆေးစစ်သလား။ ဥပမာ Ultrasoung ရိုက်သလား။ အရင်က အဲလိုဖြစ်ဘူးသလား။
ဗိုက်ညာဘက် အောက်နားဆိုတာ အူအတက်ကို သံသယရှိရတယ်။ နာပုံနာနည်း ဘယ်လိုလဲ။ ကိုယ်ပူသေးလား။ တခါတလေ အဖျားတိုင်းကြည့်မှ ပူနေမှန်းသိတတ်တယ်။
အူအတက်မဟုတ်၊ ဝမ်းသွားတာလဲမှန်ရင် အလွယ်ဆေးနည်းကတော့ Antacid လေနာဆေး တမျိုးနဲ့ Buscopan, Ibuprofen, Diclofenic တမျိုးမျိုးကို အစာနဲ့ တွဲသောက်နိုင်တယ်။
ကျမ သမီးလေးက ၉ လရှိပါပြီဆရာ။ သမီးလေးက ထမင်းသိပ်မစားလို့ပါ။ ထမင်းစားချင်စိတ် ရှိလာအောင် ဘယ်အားဆေးက ကောင်းလဲလို့ သိချင်လို့ပါ ဆရာ။ သမီးလေးရဲ့ကီလိုက (၇) ကီလိုပါ။
ကလေး ၆ လနောက်မှာ အားဆေးတိုက်သင့်ပါပြီ။ အခြေခံက ဗီတာမင် ဘီ အုပ်စု ဆေးရည် ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ Vitamin B complex, Polybion syrup, Burplex syrup စတာမျိုး ဖြစ်တယ်။
အစာမစားချင်ဖြစ်နေတာကို ဒါနဲ့လဲ ကောင်းစေနိုင်တယ်။ လိုသေးရင် Cypon syrup/drop လဲ တိုက်နိုင်တယ်။
သွား-အရိုး အားကောင်းအောင် Calcium တိုက်နိုင်သေးတယ်။ ဗီတာမင် အေ ကို စိတ်စောစရာ မလိုပါ။ စီ ကလဲ သိပ်မလိုတတ်ပါ။ ဒီ ဆိုတာလဲ နေရောင်ရရင် မလိုတတ်ပါ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ၂၉-၁ဝ-၂ဝ၁၁ သွေးစစ်တာ
hiv 1/ hiv2Antibody (ELISA) Non- Reactive
အဲဒီအဖြေက ပြီးခဲ့တဲ့ ဘယ်နှစ်လထိ အကျုံးဝင်ပါသလဲခင်ဗျာ။